महिनावारी गौरबको विषय हो, यसलाई बार्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन - RatoKalam.com is No one news portal.
महिनावारी गौरबको विषय हो, यसलाई बार्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन
March 8, 2019 मा प्रकाशित
सन्दर्भ : १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
महिलाहरुको पाठेघर तथा अण्डासयमा दुई किसिमका हार्मोन (आष्ट्रोजन र प्रोजेष्ट्रक्सी) हुन्छन् । कन्ट्राक्सन तथा यसका भित्री तह इडोमेट्रियम बनाउन र विगार्न तथा महिनावारी गराउने भूमिका यिनीहरुले खेल्छन् । स्वास्थ्य विज्ञानमा पाठेघरको भित्री तहमा हार्मोनहरुको नियन्त्रणमा टुक्रिएका टुक्राहरु योनीमार्ग हुँदै रगत बग्ने प्रक्रियानै वास्तवमा रजस्वला हो । अझ गर्भाधान नभएका डिम्बहरु महिलाको योनीबाट निश्कासित र सामान्य प्रक्रिया नै रजश्वला हो ।
तर, नेपालको हिन्दू संस्कार/समाजमा रजश्वला भएकी महिलालाई हरेक कुराबाट बर्जित गरिन्छ । सबै नेपालीहरु सामु अझै पनि शैक्षिक चेतना पुग्न सकेको छैन् । देशको गरिबी र गलत शिक्षा प्रणाली नै मानवीय चेतनको बाधक हो । समाजका शिक्षित भनाउँदाहरुले नै आफ्नो ज्ञानलाई दैनिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । समाजमा बुझक्कडहरु नै रजश्वला जस्तो प्राकृतिक उपहारलाई आधुनिक विश्वमा पचाउने सामथ्र्य नराखेको स्थिति छ । उचित जीवनोपयोगी शिक्षाको कारणले गर्दा हामी भौतिक रुपमा मात्र होइन् मानसिक रुपमा समेत पछाडि परेका छाँै । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसको बेजोड प्रभाव छ । नारी जातिले प्रत्येक महिना भोग्नु पर्ने महिनावारीको विषयमा समेत ज्ञानको कमीले गर्दा यसलाई गलत अर्थमा समाजले हेर्ने गरेको छ । वास्तवमै महिनावारी के हो त भन्ने विषयमा जानकार नहुनुले हरेक अवसरबाट महिलाहरु बञ्चित छन् । प्राचिन समयदेखि नै वर्तमान समयसम्म नारीमाथी उत्पीडन सामाजिक र साँस्कृतिक सम्बन्धसँग जोडिएको एउटा विषय हो, रजश्वला । समाजले जहिले पनि नारीलाई कमजोर ठान्नुका साथै पुरातन विचारधाराले केवल भोगको साधन बनाएर मान्छे छाप्ने साधन नारीलाई ठान्छ । नेपालको हिन्दू संस्कारमा रजश्वला भएकी महिलाले विरुमा छोएमा मर्ने, खाना पकाएर दोश्रो व्यक्तिलाई दिँदा पाप लाग्ने, इश्वरको आरधना गर्दा भगवान रिसाउने जस्ता भ्रामक तर्कहरु छन् । तर, अध्यात्मवादको खोल ओडेर कति सजिलै पुरुषहरुको स्वप्नदोषलाई प्राकृतिक नियम ठान्छ, नेपाली समाज । समाजमा कतिपय मान्छेहरु पाखण्डी विचारका छन् । जसले नारीलाई बर्षै हरेक हिसाबबाट दबाएर, अन्यायमा पारेर, हरेक अवसरबाट बञ्चित गराएर, बर्षको १ दिन ‘ह्याप्पी वुमेन डे’ लेखि आफूलाई नारीको सम्मान गरेको कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा बोक्रे आदर्श दर्साउँछन् । नारीलाई हेर्ने सङ्किर्णताको दृष्टिकोणलाई जब बदलिन्छ तब मात्र सामाजिक संस्कृति र धार्मिक मान्यताहरुबाट नारी मुक्ति सम्भव छैन र ?
समाजमा महिलामाथि पैसाको भरमा र कथित स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेका दमन, उत्पीडन र रुढिबादका करोडौं दस्तावेजहरु हामी पढ्छौँ । आज नारी रजश्वलाका नाममा भइरहेका विकृति र तमाम विसङ्गतिहरु सनातन परम्परा र हिन्दू समाजको उपज र देन होइन, बरु सहि शिक्षा र चेतनाको अभाव हो । सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रजश्वला भएकी महिलालाई पुरा–पुर अशुद्ध मानिन्छ । ४ देखि ५ दिनसम्म छाउ गोठमा बस्न बाध्य बनाइन्छ । उचित शिक्षा र जनचेतनाको अभावले अन्धकारमा जीवन विताइरहेका त्यहाँका दिदी बहिनीहरु शिक्षाको उज्यालो किरणको पर्खाइमा छन् । सेनेटरी प्याडको अभावमा थोत्रो कपडाको टालो र खरानीको प्रयोग गर्दै आएका त्यहाँका आम महिलाहरु कसरी शारिरीक रुपमा आफू सुरक्षित भएका महशुस गर्छन ? सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मात्रै होइन हामै्र सेरोफेरोमा रहेका महिलाहरुलाई महिनावारी भएको बेलामा छुट्टै कोठामा सुत्ने, खाने, बस्ने प्रबन्ध मिलाइन्छ । जुन समयमा हामीलाई सबैको साथ र हेरचाहको आवश्यकता पर्छ, त्यही बेला मान्छेको सामिप्यताबाट अलग गरिन्छ । महिलाहरुमाथि यो कस्तो मानवता हो ? हार्मोनको परिवर्तनसँगै यो अवस्थामा महिलाहरु शारिरीक रुपमा कमजोर बनेका हुन्छन् । पोषिलो खाना, उच्च मनोबल, माया र हेरचाहको खाँचो हुने बेला हो यो । मासिक श्राव एउटा शारिरीक चरण पनि हो । जो हरेक महिलाहरुको जीवनमा हुने गर्दछ । मासिक श्राव हुने भनेको महिला प्रजजनन्का लागि योग्य हुनु हो । रजश्वला त फल दिने पूर्व सन्ध्यामा सुनौलो र आकर्षक फूलको सिर्जना भएका एउटा मोड हो, जुन श्रृष्टिका लागि छ । महिलाहरुलाई रजश्वला नहुने हो भने, यो संसारमा जन्मको प्राकृतिक नियम पनि तोडिन्थ्यो । कतिपय उग्रवादी पुरुषहरु रजश्वलालाई पाप ठान्छन् भने आफूलाई यो धर्तिमा आउनु पनि पाप नै हो भन्न सक्नु पर्छ । प्राकृतिक र स्वाभाविक कृयालाई पनि नारित्वको सीमाको रुपमा हेरिनु विडम्बना हो । यो विषय किन पुरुषको सन्दर्भमा लागु हँुदैन ? पुरुषको लिङ्गले सामाजिक सन्दर्भमा विशिष्ट महत्व पाँउछ तर, त्यही सामाजिक धार्मिक सन्दर्भले महिलाहरुको धर्मलाई एउटा अभिसाप ठान्छ ।
महिलाहरुको प्राकृतिक रुपमा भएको घटनालाई लिएर नानाथरी धार्मिक कुरासँग जोड्नुपर्छ भन्ने छैन् । भगवान शुद्ध हुन्छन् भनेर सिकाउने अनि भगवानको रुप देख्ने महिला फेरी कसरी अशुद्ध ? पाप र धर्म त कर्मले गर्छ, न कि कसैको रगतले । महिलाहरु महिनावारी हुँदा पशुजस्तै गोठमा किन रात विताउनु ? महिनावारी पाप नै हो भने देवीहरुको रुपमा पूजिने सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती र सीता जस्ता देवीहरु पनि महिला नै हुन् । उनिहरुको मूर्ती भएका मन्दिरहरु अनगिन्ती छन्, ति देवीहरु पनि त प्रकृतिको परिधि भित्र थिए । उनिहरुलाई पनि रजश्वला हुन्थ्यो । अनि हामी नारीहरुलाई नै चाँही किन रजश्वला भएर मन्दिर छिर्न नहुने ? तसर्थ, रजश्वला कुनै प्राण घातक रोग होइन, यो प्राकृतिक र स्वभाविक नियम हो । सामाजिक हेयको रुपमा रजश्वला भएको नारीहरुलाई हेर्नु भन्दा रजश्वलाको विषयमा सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्ने, रजश्वलासम्बन्धी जनचेतना दिनुको विकल्प छैन । हरेक पुरुषले पनि यसको व्यवस्थापनमा महिलालाई सहयोग पु¥याउन जरुरी छ । समयको गतिसँगै पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । कुनै पनि कुरा यथास्थितिमा लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैन । हाम्रा हजुरआमा, आमा र हामीसम्म आइपुग्दा पहिलेका चलनहरु अहिले फेरिएका छन् ।
परिवर्तन सबैको प्रेरणाको विषय बन्नु पर्छ । मासिक श्रावका कारण विशेष गरि किशोरीहरुमा चिन्ता तथा निराशा समेत आउनु सक्छ । कतिपय अवस्थामा महिलाहरुले रजश्वलाको समयमा हिनताबोध समेत गर्छन् । तसर्थ यस्तो अवस्थामा आफ्ना छोरीहरुको विशेष ध्यान दिनु पर्छ । रजश्वला भएको बेला अझैपनि महिलाहरु कठोर परिश्रम गरिरहेको र गर्नैपर्ने यथार्थता हामीबाट टाढा छैनन् । यता पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरुलाई गरिएको श्रम शोषण, शारिरीक शोषण र दमन हो । यो त महिला उपर अत्याचार हो । अबका महिला भनेका आधुनिक समाजका सम्वाहक साथै प्रवुद्ध वर्गका महिलाहरु हुन् । अब महिलाहरुले धार्मिक साँस्कृतिक परिप्रेक्षको रक्षाको गर्दै रितिरिवाज कायम राख्ने पहल गर्नुपर्छ । मानव श्रृष्टि नारी विना सम्भव छैन र हामीलाई रजश्वलालाई जति नै लुकाएपनि छुवाछुत उन्मुख रुपमा हेरेपनि श्रृष्टिका प्रथम गुणनै हामी नारीहरुको रजश्वला हो । तसर्थ अव रजश्वला हुँदैमा कुनै पनि महिला कुनै पनि अवसरबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । यो परिवर्तनसँगै मानवीय चेतनामा पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ । हामीले महिलामाथि हुने धार्मिक ज्यादति विरुद्ध लड्न आवश्यक छ । रजश्वला भएकै निहुँमा महिलालाई रहेक कुरामा बन्देज लगाउनु महिलामाथि पशु समान धारणा राख्नु हो । छाउगोठमा हरेक सुविधाबाट बञ्चित गराई, मानवअधिकारको हनन् गरि महिलामाथि हुने अत्याचारको अन्त्यका खातिर सुरुआत आफू स्वयंबाट गर्न जरुरी छ । महिनावारीका सम्बन्धमा धर्मका व्याख्याता महिला अधिकारकर्मी र स्वयं राज्य संयन्त्र पनि गम्भिर बन्न जरुरी छ । अब महिलाहरुलाई रजश्वलाको बेला भान्साबाट होइन गाह्रौं कामबाट टाढा राखौं ।
(अखिल (क्रान्तिकारी)की केन्द्रीय सदस्य आचार्य समसामयिक, राजनीतिक तथा महिलाका विषयमा कलम चलाउँछिन् ।)